Fahamarinana na fahasahiana amin'ny fitsangatsanganana sy fizahan-tany: fitokisana - ny sisintany farany
Home » Lahatsoratra farany farany » Tourism » Fahamarinana na fahasahiana amin'ny fitsangatsanganana sy fizahan-tany: fitokisana - ny sisintany farany
Fitsangatsanganana an-trano • Cruising • Kolontsaina • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao momba ny indostria fihaonana • Vaovao • fanorenana • Resorts • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
fitsangatsanganana sy fizahan-tany - matokia ny sisin-tany farany
Ny lainga dia toy ny vatomamy ao amin'ny fivarotana vatomamy, tonga amin'ny loko sy habe samihafa izy ireo ary manolotra traikefa samihafa. Ny lainga sasany dia entin'ny vola sy ny fitiavam-bola, ny lainga hafa kosa dia entanin'ny filan'ny ego. Ny olona sasany handainga hisorohana ny sazy, ny hafa handainga amin'ny fientanam-po amin'ny fialana amin'ny lainga, fa ny hafa kosa mandainga hanarona lainga teo aloha. Miaraka amin'ireo korontana ateraky ny areti-mandringana, amin'ny fitsangatsanganana sy fizahan-tany, ny fitokisana - ny sisintany farany - no ho lohalaharana amin'ny fanarenana.
Trust. Ny sisin-tany farany COVID-19
Na dia miaraka amin'ny filoha vaovao ao amin'ny White House aza, ny COVID-19 miaraka amin'ny fahafatesany sy ny fandravana azy dia tsy hanjavona amin'ny champagne vera iray. Na dia tafiditra ao anaty boky tantara aza ity areti-mandringana ity, dia misy virus hafa miandry eo an-elany.
Afaka taona maro vao hahatsapa ho mahazo aina ny mpanjifa amin'ny fandehanana any amin'ny toerana lavitra miaraka amin'ny anarana maneno hafahafa ary fotoana betsaka kokoa aza hatokisana ireo mpanadio hotely, vokatra ary serivisy fizahan-tany ary fizahan-tany.
Ny fikarohana nataon'ny PWC.com momba izay tadiavin'ny mpanjifa amin'ny indostrian'ny fandraisam-bahiny dia nahita fa:
1. Ny fiarovana dia eo an-tampon'ny lisitry ny mpanjifa ary vonona ny handoa izany izy ireo.
2. Ny mpanjifa dia mila fampahalalana marina miaraka amin'ny 85 isan-jato izay manondro fa ny fanapahan-kevitry ny fitsangantsanganana dia miankina amin'ny serasera azo avy amin'ny hotely sy seranam-piaramanidina momba ny fiarovana; na izany aza, 40 isan-jato no nilaza fa tsy nahafa-po azy ireo ny fifandraisana izay raisin'izy ireo momba ny protokol fiarovana.
3. Ny fanadiovana dia miitatra amin'ny serivisy fitobiana fiara izay hanome toky ny vahiny fa mahatakatra ny laharam-pahamehany ny hotely.
4. Ireo mpanjifa dia mitady toeran-kaleha izay ampy fitaovana amin'ny toeram-pitsaboana. Ny fahafantarana fa ho manodidina ny olon-kafa izy ireo (izay mety hampidi-doza) dia mitandrina izy ireo amin'ny fomba fitaterana sy ny toerany.
5. 43 isan-jaton'ny mpanjifa no mety handany bebe kokoa hanamafisana ny halaviran'ny vatany amin'ny sidina manaraka raha toa ka vonona ny handoa 60 isan-jato bebe kokoa ireo fianakaviana manan-janaka.
6. Ireo mpividy dia mametraka ny finoany amin'ny marika itokisany, mampitovy ny marika amin'ny fahadiovana.
7. Taloha, ny vidiny, ny programa tsy fivadihana, ny toerana misy ary ny zotram-pitaterana an'habakabaka dia nitovy lanja ihany, ankehitriny, ny fahatokisan-tena amin'ny marika dia mifamatotra amin'ny fahatokisana ny filaminana sy ny fahadiovana ary mety hiteraka orinasa vaovao.
8. 75 isan-jaton'ny mpamaly no nilaza fa ny mpiasa manao PPE sy ny fanamarinana fanadiovana voamarina an'ny antoko fahatelo dia nanome azy ireo filaminana.
9. Te-hivezivezy ny olona. Azo inoana fa ireo mpanjifa 18-40 taona dia hitarika ny fiampangana amin'ny 13 isan-jato izay manondro fa hanao dia lavitra kokoa amin'ny ho avy izy ireo tamin'ny taona 2019.
10. Ireo toerana tsy misongadina amin'ny COVID-19 19 dia mety hahita mpitsidika vaovao - raha toa ka misy ny fifandraisana sy ny fahaizan'ny hopitaly.
11. Ny vaksinina dia azo inoana fa hahatonga ny fahatokisan-tena ho an'ireo mety handeha; Na izany aza, mitady ihany koa izy ireo ny hahazo fidirana mora amin'ny fanandramana any amin'izay alehany.
12. Ireo mpanjifa dia maniry fanaraha-maso ny tontolo iainany.
13. Ny fiara mandeha no laharam-pahamehana noho ny manidina.
14. Ny trano fandraisam-bahiny dia tokony hampiasa marketing amin'ny alàlan'ny angon-drakitra mba hikendry ireo mpanjifa azo inoana indrindra fa hijanona ao amin'ny tranony ao anatin'ny halaviran'ny fiara - amin'ny fotoana fohy.
Iza no mandeha, rahoviana ary aiza, no ho voataonan'ireo tompon'andraikitra amin'ny governemanta manamaivana ny fameperana, ireo orinasa namolavola ny politikam-pitsangatsanganana ho an'ireo mpiasan'izy ireo sy ireo mpahay siansa mamokatra vaksiny sy fitsaboana.
Ireo mpanjifa dia maniry ny hiaraka amin'ny fahatsapana tsara azony amin'ny fialantsasatra; na izany aza, raha jerena ny COVID-19 dia te hiala voly izy ireo, voaro ary mahatsiaro ho voaro. Tian'izy ireo hampahafantarina azy ireo ny ataon'ireo mpilalao indostria hanatsarana ny fenitry ny fiarovana azy ireo, miorina amin'ny protokolome nomen'ny loharanom-baovao matoky. Misy mpilalao vaovao eo amin'ny sehatry ny fandraisam-bahiny - ary MARINA izany.
Vakio eto ny fizarana 2 amin'ity andiany fizarana 3 ity.